Ireo fahotako eo anatrehan’Andriamanitra
"Andriamanitra ô, … sasao madio aho mba ho afa-keloka, ary diovy aho mba ho afa-pahotana."Salamo 51:1,2
"Ny Zanak’Andriamanitra … efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy."Galatiana 2:20
Efa mihavery, ary tsy eritreretin’ny maro intsony aza, ny fiheverana fa mety hanota eo anatrehan’Andriamanitra ny olona. Lazaina fa miantomboka ny faharatsiana, rehefa mitera-pahavoazana ho an’olona ny ataontsika. Tsy izany anefa no ampianarin’ny Baiboly, ilay hany fenitra araka an’Andriamanitra. Inona marina moa no ambarany?
-“Andriamanitra dia mazava” (1 Jaona 1:5). Masina Izy, marina ary tsy te hitsinjo ny ratsy (Habakoka 1:13). Lainga kely fotsiny, na fialonana mandalo ao an-tsaina, dia maneho amiko sahady fa efa toetrako mihitsy ny hoe mpanota. Izany toetra izany, izay antsoina hoe ota, dia ifampitan’ny taranaka : “Tahaka ny nidiran’ny ota avy tamin’ny olona iray (Adama) ho amin’izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran’ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra...” (Romana 5:12). “Tsy misy marina na dia iray akory aza” (Romana 3:10). Koa dia mpanota aho hatramin’ny nahaterahako, ary tsy maintsy miaiky fa manota noho ireo fahadisoako sy tsy fankatoavako an’Andriamanitra. Sahaza ahy ny fitsarany sy ny fanamelohany.
-Na izany aza anefa, dia hoy koa ny Baiboly amiko: “Andriamanitra dia fitiavana” (1 Jaona 4:8). Halany ny ota, saingy tiany kosa ny mpanota, ary efa nanomana lalana hamonjena ahy Izy. Jesosy, noho ny fitiavany, dia nisolo ahy, nizaka ny fanamelohana sahaza ahy. Teo amin’ny hazofijaliana Izy, Ilay hany Lehilahy marina, no nitondra ny fahalotoan’ny toetrako rehetra. Niaretany ny fahatezeran’Andriamanitra amin’ny ota, nandritra ireo ora telo maizina teo amin’ny hazofijaliana. Androany aho dia manana antoka fa efa narian’Andriamanitra tany ivohony ny fahotako rehetra (Isaia 38:17).